Kungakusiza Kanjani Ukukhangisa Okungumongo Ukulungiselela Ikusasa Elingasenalutho? | Martech Zone
Kungakusiza Kanjani Ukukhangisa Okungumongo Ukulungiselela Ikusasa Elingasenalutho?
NgoLwesithathu, Septemba 29, 2021 NgoLwesithathu, Septemba 29, 2021 U-Albert Nieto
IGoogle isanda kumemezela ukuthi ibambezela izinhlelo zayo zokukhipha amakhukhi wenkampani yangaphandle kusiphequluli se-Chrome kuze kube ngu-2023, unyaka ngemuva kwalokho obekuhlelile ekuqaleni. Kodwa-ke, yize isimemezelo singazizwa siyisinyathelo esibuyela emuva empini yobumfihlo babathengi, imboni ebanzi iyaqhubeka nokuqhubeka nezinhlelo zokwehlisa ukusetshenziswa kwamakhukhi ovela eceleni. I-Apple yethule ushintsho ku-IDFA (ID yabakhangisi) njengengxenye yokuvuselelwa kwayo kwe-iOS 14.5, okudinga ukuthi izinhlelo zokusebenza zicele abasebenzisi ukuthi banikeze imvume yokuqoqa nokwabelana ngemininingwane yabo. Ngaphezu kwalokho, iMozilla neFirefox sezivele zikumisile ukusekelwa kwama-cookies avela eceleni ukulandela abasebenzisi kuziphequluli zabo. Noma kunjalo, ngokubalwa kwe-Chrome kwe- cishe isigamu kuwo wonke ama-web traffic e-US, lesi simemezelo sisakhombisa ushintsho lokunyikima komhlaba kumakhukhi wenkampani yangaphandle.
Lokhu konke kuholela ekukhangisweni kwe-inthanethi okuqhutshwa ukujwayela iwebhu eqhutshwa ubumfihlo, kunikeze abasebenzisi bokugcina ukulawula okungcono kwedatha yabo. Umugqa wesikhathi ka-2022 ubuhlale ufisa kakhulu, okusho ukuthi lesi sikhathi esingeziwe samukelwe abakhangisi nabashicileli, njengoba sibanikeza isikhathi esithe xaxa sokuzivumelanisa. Kodwa-ke, ukushintshela ezweni elingenakho ukupheka ngeke kube yinto eyodwa, kodwa inqubo eqhubekayo yabakhangisi esivele iqhubeka.
Ukususa ukuthembela kumakhukhi
Ekukhangiseni kwedijithali, amakhukhi wenkampani yangaphandle asetshenziswa kakhulu yizinkampani zezikhangiso ukukhomba abasebenzisi kudeskithophu nakumadivayisi eselula ngenhloso yokukhomba nokubika. Ngokuya ngoshintsho ezintweni ezithandwa ngabathengi zokuthi idatha yabo iqoqwa noma isetshenziswe kanjani, ama-brand azophoqeleka ukuthi anciphise ukuncika kwawo kumakhukhi, adlulele esikhathini esizayo esihlangabezana nezindinganiso ezintsha zobumfihlo. Amabhizinisi esikhaleni angasebenzisa le nkathi entsha njengethuba lokuxazulula ezinye zezinkinga ezixhunywe kumakhukhi, njengokulayisha kancane nokuntuleka kokulawulwa kwedatha yomshicileli yamaqembu wokuhlela, noma ukufana kwamakhukhi phakathi kwezingxenyekazi ezahlukahlukene zabakhangisi.
Ngaphezu kwalokho, ukuthembela kumakhukhi kwenze abathengisi abaningi bagxila kakhulu kumasu abo wokukhomba, bewabona ethembele kumamodeli wokunikeza angabazekayo futhi amukela amayunithi wezikhangiso ajwayelekile afuna ukwenzelwa ukukhangisa. Kaningi kunalokho, ezinye izinkampani kulo mkhakha ziyakhohlwa ukuthi sona kanye isizathu sokuthi kube khona ukukhangisa ukudala imizwa emihle kunoma ngubani oxhumana nomkhiqizo.
Kuyini Ukukhangisa Okuqukethwe?
Ukukhangisa kokuqukethwe kusiza ukukhomba amagama angukhiye ahamba phambili futhi kufinyelele kumakhasimende ngokuhlaziywa okufana nokwabantu kokuqukethwe (kufaka phakathi umbhalo, ividiyo, nezithombe), inhlanganisela yazo, nokubekwa kwayo ukuze kukwazi ukushumeka isikhangiso esifana nokuqukethwe nemvelo yekhasi.
Ukukhangiswa komongo 101
Umongo Uyimpendulo Ehamba Phambili Futhi Yiyo Yodwa Etholakala Ngezinga
Ngenkathi izingadi ezibiyelwe ngodonga zizohlala ziyindlela yokuthi abakhangisi bahlanganyele namakhasimende abo abangahle basebenzise idatha yenkampani yokuqala, umbuzo omkhulu ukuthi kuzokwenzekani kuwebhu evulekile ngaphandle kwamakhukhi. Izinkampani ezisemkhakheni wezobuchwepheshe bezikhangiso zinokukhetha okubili: ukufaka amakhukhi obunye ubuchwepheshe obuvumela ukuthi bagcine ukubhekeka kuwebhu; noma shintshela kokukhethwa kukho kokukhomba okuyimfihlo njengokukhangisa kokuqukethwe.
Imboni yezobuchwepheshe besikhangiso isezinsukwini zokuqala zokukhomba isixazululo esifanelekile somhlaba wamakhukhi ovela eceleni ovela eceleni. Inkinga ngekhukhi akuyona ubuchwepheshe bayo, kepha ukungabi bikho kwayo okuyimfihlo. Ngokukhathazeka kwangasese kahle futhi kugxilile ngokweqiniso, abukho ubuchwepheshe obwehluleka ukuhlonipha abasebenzisi obuzobusa. Ukuqondiswa kokuqukethwe kusetshenziswa Ukucubungula Ulimi Lwemvelo (I-NLP) kanye ne-Artificial Intelligence (AI) ama-algorithms awatholakali kuphela futhi ayasebenza ngezinga, kepha futhi abonakala esebenza ngempumelelo njengoba bekukhonjwe izethameli.
Amandla wemikhiqizo yokuqonda okuqukethwe okusetshenziswa ngumsebenzisi ngesikhathi sokulethwa kwesikhangiso kuzoba isikhombi esisha futhi esisebenza kahle kuzethameli eziqondiwe kanye nokuncamelayo kwabo. Ukuqondiswa komongo kuhlanganisa ukuhambisana nesikali, ukunemba, kanye nokuqina okunconyelwa yimidiya yohlelo.
Ukuqinisekisa ubumfihlo babathengi
Ngokuya ngobumfihlo, izimvume zokukhangisa zezimvume zokukhangisa okuqondisiwe ezindaweni ezifanele kakhulu ngaphandle kokudinga idatha evela kumakhasimende. Iyazithinta ngomongo nencazelo yezindawo zokukhangisa, hhayi izindlela zokuziphatha zabasebenzisi abakwi-inthanethi. Ngakho-ke, kucabanga ukuthi umsebenzisi uhambelana nesikhangiso ngaphandle kokuncika ekuziphatheni kwabo okungokomlando. Ngezibuyekezo zesikhathi sangempela, imigomo yenkampani yenkomfa izovuselelwa ngokuzenzakalela ifake izindawo ezintsha nezifanele zezikhangiso, ukushayela imiphumela ethuthukisiwe nokuguqulwa.
Enye inzuzo yamasu ukuthi inika amandla abakhangisi ukuthumela imiyalezo kubathengi lapho bemukela kakhulu imiyalezo yomkhiqizo. Isibonelo, uma umsebenzisi ephequlula okuqukethwe mayelana nesihloko esithile, kungahle kusho ukuthi intshisekelo yabo yokuthenga okuhlobene. Sekukonke, ikhono lezinkampani zobuchwepheshe besikhangiso ukukhomba okuqukethwe okwenziwe ngezifiso kubalulekile, ikakhulukazi lapho kusebenza ezimakethe ezicaciswe kakhulu noma ze-niche.
Ngomkhakha wezobuchwepheshe besikhangiso osendleleni eya ezweni elingenakho ukupheka, manje yisikhathi sokuzivumelanisa nokwenza isiqiniseko sokuthi abathengi bayakwazi ukuhlinzeka abasebenzisi bokugcina abaqhutshwa ubumfihlo, abanamadijithi ngokulawula okungcono kwedatha yabo. Njengoba ukukhonjwa kokuqukethwe kukhombisile ukuthi kuyasebenza ngezibuyekezo zesikhathi sangempela nokwenza ngezifiso, abathengisi abaningi bayayifuna njengenye indlela yamakhukhi wenkampani yangaphandle.
Izimboni eziningi zivumelane ngempumelelo nezikhathi ezibalulekile ezichazayo futhi zigcine ngokuba zinkulu futhi zinenzuzo enkulu ngenxa yalokho. Ukwenziwa kwe-inthanethi, ngokwesibonelo, kudale amathuba omhlaba wonke wezinhlangano zokuvakasha, futhi labo abalwamukela lolu shintsho bavela ezinkampanini zasekhaya noma zikazwelonke baba amabhizinisi omhlaba. Labo abamelene nalolu shintsho, futhi ababekanga amaklayenti abo phambili, mhlawumbe abekho namuhla. Umkhakha wezokukhangisa awukhethi futhi amabhizinisi kumele achaze isu lawo emuva. Abathengi bafuna ubumfihlo ngendlela efanayo abafuna ukubhuka ngayo amaholide abo ku-inthanethi - uma lokhu kunikezwa kuzobe sekuvela amathuba amasha, athokozisayo kuwo wonke umuntu.
Funda Kabanzi NgeSexttag's Contextual AI Technology
Tags: ukunamathelaubuchwepheshe bokukhangisaaiukuhlakanipha okungekhona okwangempelaubumfihlo babathengiukukhangisa okuqukethweIkhukhiukuphekaamakhukhiamakhukhi eqembu lokuqalaiqembu lokuqalaamakhukhi eqembu lokuqalaikusasa lezikhangisoukucutshungulwa kwezilimi zemveloNlpubumfihlo
I-seedtag iyinkampani ehamba phambili yokukhangisa yemixholo edala izixazululo ezinomthelela omkhulu futhi ezibandakanyayo kokuqukethwe okubukwayo kwe-premium efanelekile, inike amandla ukukhomba nezimbuyiselo zabashicileli abaphezulu nemikhiqizo emihle kakhulu. Ingqikithi yenkampani i-AI ivumela ama-brand ukuthi ahlanganyele nabathengi abasemkhathini wabo onentshisekelo ngaphandle kwama-cookie.
I-Return on Investment (ROI) yamapulatifomu we-Marketing Automation